5 beddel oo lagu gubo ISO-ga DVD-ga ama warbaahinta kale ee jirka | War gadget
Ma waxaad raadineysaa sida gubi ISO si DVD? Xawaaraha sare ee xawaaraha xadka internetka ee aan qandaraaska ku qaadan karno inaan webka ka adeegno maanta Soo dejinta sawirka ISO taas oo u dhiganta codsiyada ama ciyaaraha fiidiyowgu waa mid ka mid ah waxqabadyada ugu caansan ee laga yaabo inay ogaadaan dadka isticmaala badan.
Haysashada sawirradan ISO waxay matali kartaa rakibidda softiweer gaar ah haddii aan adeegsanno codsi naga caawinaya dhaji sawiradan. Haddii aynaan haysan qalab khaas ah, nasiib darro taasi suurtagal noqon mayso. Si kastaba ha noqotee, Kawaran hadaan ubaahanahay muuqaalkan ISO kumbuyuutar kale? Hadday xaaladdu sidan tahay, markaa waxaan u baahanahay inaan ku gubeyno sawirradan ISO muuqaal muuqaal ah (CD-ROM ama DVD) oo, ugu wanaagsan dhammaantood, u wareeji waxyaabaha ay wataan USB pendrive sidaad adigu sameyso. Windows 7 DVD DVD ah.
1 5 qalab oo lagu gubo ISO si DVD
1.1 Firfircoon @ ISO Burner
1.3 Gubi bilaash ah ISO
2 Ku gubo ISO Windows 10
3 Ku dhaji faylka ISO ee Windows 10
4 Sida loo gubo ISO-ga Mac
5 Ku dhaji sawir ISO ah Mac
5 qalab oo lagu gubo ISO si DVD
Mid kasta oo ka mid ah beddelaadaha aan xusi doonno xilligan waxay u heellan yihiin awoodda gubi ISO warbaahinta kala duwan ee keydinta, inkasta oo waxa runti muhiim ah ay tahay iswaafajinta aaladahaan qaababka muuqaalka kaladuwan ee maanta jira. Sababtaas awgeed, haddii aad u baahato qalab khafiifa oo kaa caawinaya oo keliya inaad ku gubto sawirradan ISO aaladda kale, waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah kuwa aan hoos ku soo jeedin doonno.
Sida loo sameeyo USB Bootable
Firfircoon @ ISO Burner
Waxaan ku dhowaan karnay taas Firfircoon @ ISO Burner Waa beddel aad u fiican oo lagu gubi karo sawirradan ISO-ga ah dusha maqaarka. Xaruntu waa mid xad dhaaf ah, taas oo macnaheedu yahay waxaan u baahanahay oo keliya inaan CD-ROM, DVD ama buluugga Ray disc ku galino saxanka kombiyuutarka kadibna, dooro sawirka ISO ee aan ubaahanahay inaan ku keydino warbaahintaan.
Fursado dheeraad ah sida sameynta nuqulo aad u tiro badan waa waxa Active @ ISO Burner na siiso, taas oo macnaheedu yahay haddii aan u baahanahay illaa 100 nuqul waxaan ka barnaamijsan karnaa isla aaladdan. Waxay sidoo kale la jaanqaadi kartaa saxannada dib loo qori karo, wax guud ahaan loo isticmaalo marka aan u baahanno inaan sameyno duubitaan ugu horreeya ee sawirka ISO.
BurnCDCC sidoo kale waa bedel wanaagsan oo loogu talagalay gubaan image ISO DVD ah ama wax kasta oo dhexdhexaad ah (sida qalabkii hore).
Meelaha qayb ka ah isdhexgalka qalabkan waxay xusayaan suurtagalnimada xulashada sawirka ISO, saxanka aan ku gubaneyno, xaqiijineyno qoritaanka, xiro kulanka duubista iyo saxaaraddii la soo saari lahaa ka dib marka duubistu dhammaato. Qeybta hoose ee xulashooyinkaan waxaan sidoo kale ku qanacsan karnaa xulis yar oo naga caawin doona inaan dooranno xawaaraha duubista ee sawirradeenna ISO.
Sida loogu wareejiyo nuxurka sawirka ISO-ga ah usha USB-ga iyada oo aan la adeegsan wax dalab ah
Gubi bilaash ah ISO
Inkasta oo leh interface ka duwan, laakiin Gubi bilaash ah ISO noqda bedel aan u isticmaali karno gebi ahaanba bilaash gubi ISO si DVD. Meelaha isdhexgalka ayaa aad ugu eg kuwa qalabkii hore.
Waxaan kaliya dooran doonaa sawirka ISO, cutubka aan aadi doono si aan u gubno, xawaaraha qorista iyo ikhtiyaarka (sanduuqa) kalfadhiga duubista uu xirmayo marka howshu dhammaato. Qalabkani wuxuu ka shaqeeyaa Windows XP wixii ka dambeeya, isagoo ah faa'iido weyn maaddaama aysan jiri doonin is-waafajin marka ay timaaddo taageeridda sawirradeenna ISO-ga ee dhexdhexaad dhexdhexaad ah.
ImgBurn Waxay leedahay interface yar oo sifiican loo sharaxay, maadaama ay na tusi doonto dhamaan howlahaas aan dooran karno markaan ubaahanahay inaan ku qabano ficil gaar ah sawiradayada ISO.
Tusaale ahaan, waa kuwan xulashooyinka aad awoodid keydso sawirada ISO si aad uhesho, ka sameyso sawir ISO galka ama tusaha, suurtogalnimada abuurista sawir ISO ah oo ka imanaya diskka jirka, adoo hubinaya xaaladda uu ku sugan yahay sawirkeenna ISO oo ka mid ah astaamo kale oo yar.
ISOBurn waxay la jaan qaadi kartaa Windows XP wixii ka dambeeya waxayna na siineysaa isku xirnaan aad u fudud oo aan wax ka qabanno. Sida qalabka kor ku xusan, halkan waxaan sidoo kale dooran karnaa sawirka ISO iyo meesha aan dooneyno inaan ku gubno.
Ikhtiyaar dheeraad ah oo lagu muujiyey salka hoose ee ISOBurn interface ayaa noo oggolaan doona fuliyaan masixi deg deg ah diskka la geliyay. Shaqadani waxay noqon kartaa mid waxtar leh haddii aan isticmaaleyno disc dib loo qori karo.
Mid kasta oo ka mid ah barnaamijyada aan kor ku soo sheegnay waxaa loo isticmaali karaa in lagu gubo ISO-ga diskiga jirka, taas oo noqon karta CD-ROM-kan, DVD-ga ama Ray-ka buluugga ah.
Ku gubo ISO Windows 10
Daahfurka Windows 10 wuxuu matalayay tiro badan oo isbadalo ah, kaliya ma ahan howlgalka Windows sida aan u ogolaanay ilaa daqiiqadaas, laakiin sidoo kale markay tahay adeegsiga codsiyada qeybta saddexaad, maadaama shirkada fadhigeedu yahay Redmond ay soo bandhigtay astaamo cusub taas oo aan laga heli karin noocyadii hore, sida ikhtiyaariga ah in ku gubo faylasha ISO CD-ga ama DVD-ga adigoon isticmaalin codsiyada dhinac saddexaad.
Nidaamka lagu abuurayo CD ama DVD laga soo qaaday sawirka ISO ayaa aad uga fudud marka loo eego codsiyada dhinacyada saddexaad ee laga heli karo suuqa. Maaddaama ay tahay inaan kaliya isku dul dhigno feylka su'aasha ah, ka baare faylka oo guji badhanka midig. Marka xigta waa inaan dhagsii Sawirka Gubashada.
Tallaabada xigta daaqad ayaa la soo bandhigi doonaa halka ay tahay inaan ku sheegno nooca baabuurka aan dooneyno inaan ku gubno sawirka diskiga. Haddii aan kaliya ku haysanno kumbuyuutarka kumbuyuutarka kumbuyuutarka. Qeybta hoose ee daaqadaas, Windows wuxuu na siinayaa suurtagalnimada hubi in xogta si sax ah loo duubay marka hawshu dhammaato.
Maskaxda ku hay in haddii aan horay u haysanno codsi kaas oo mas'uul ka ah maareynta faylasha ISO, xulashooyinka menus ee aan faallooyinka ka bixiyay lama heli doono, markaa waa inaad tirtirtaa arjiga asalka ah ee ujeeddooyinkan ama aad sifooyinka faylka oo u deji faylka baaraha iska ilaali inaad furto noocyada faylasha.
Ku dhaji faylka ISO ee Windows 10
Codsiyada dhinac saddexaad si ay u awoodaan inay ku gubaan faylasha ISO CD ama DVD, xaaladaha intooda badan waxay noo ogolaadaan inaan sidoo kale dhajino sawiradaas si aan awood ugu helno waxyaabaha ay ka kooban yihiin adigoon nuqul ka sameysan korantada indhaha. Windows 10 sidoo kale wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku qabanno shaqadan si dhakhso leh oo fudud oo aan u baahnayn codsiyo dhinac saddexaad ah wakhti kasta.
Si aad ugu dhajiso sawir ISO ah Windows 10 PC-gaaga, waa inaan tagnaa feylka su'aasha ah oo gujino badhanka saxda ah si aan uxulno xulashada Mount. Dhowr ilbiriqsi kadib, iyadoo kuxiran cabirka sawirka, waa inaan tagnaa Computerkaan> Qalabka iyo wadayaasha, meesha nuxurka sawirka ISO ayaa loo heli doonaa inuu yahay darawal cusub.
Mar mar dambe uma baahnin nuxurka sawirka ISO waa in aan barkinta ka dhignaa si ay u joojiso qaadashada boos dheeraad ah oo ku saabsan darawalkeena adag. Si tan loo sameeyo, waa inaanu dul dhignaa jiirka dushiisa oo aan midig-u-riixnaa si aan u dooranno Soo-saar.
Sida qaybtii hore, haddii ikhtiyaarradan aysan ka muuqan menus, waa inaan sii wadnaa inaan tafatirno sifooyinka furitaanka faylka ISO, si aad ugu furto biraawsarka, ama gabi ahaanba ka tirtir arjiga dhinac saddexaad ee aan ilaa hadda isticmaalnay.
Sida loo gubo ISO-ga Mac
Sida inta badan ikhtiyaarrada iyo shaqooyinka Mac, gubista sawirka ISO-ga ah ee loo yaqaan 'CD' ama 'DVD' waa geedi socod aad u fudud umana baahna inaan adeegsanno codsiyo dhinac saddexaad ah, sidii ay yeeli jirtay kahor imaatinka Windows 10 suuqa. Si loo gubo sawirka ISO-ga loo yaqaan 'optical drive', waa inaan dul istaagnaa feylka su'aasha ah oo aan gujino badhanka midig. Marka xigta, waxaan doorannaa Guba image disc "magaca faylka ISO" si ay u disc.
Marka xigta, menu la mid ah midka aan ka heli karno Windows 10 ayaa la soo bandhigi doonaa, halkaas oo aan ku dooran karno darawalka aan dooneyno inaan nuqul ka dhigno, dejino xawaaraha wax lagu qoro (marwalba waxaa lagugula talinayaa inaad hoos u dhigto sida ugu macquulsan, gaar ahaan haddii kumbuyuutarradeena uu dhowr sano jirsado) iyo haddii aan rabno hubi xogta mar duubista la sameeyo. Si aad u bilawdo hawsha, dhagsii Keydinta oo hawsha ayaa bilaaban doonta.
Ku dhaji sawir ISO ah Mac
Sida qaabkii hore, haddii aan dooneyno inaan sawir ka dul saarno Mac-geena si aan uga helno waxyaabaha ay ka kooban tahay annaga oo aan horay ugu duubin qalabka muraayadaha indhaha, uma baahnin inaan u adeegsanno codsiyo dhinac saddexaad ah, laakiin nidaamka qalliinka laftiisa ayaa na siiya a qalab kaamil ah si ay u awoodaan inay sameeyaan. Si loo furo nuxurka sawirka ISO kaliya waa inaan furnaa laba jeer ku cadaadi si aad u furto sidii inay tahay halbeeg. Waa la dhammeeyay. Uma baahnid inaad wax kale qabato, maaddaama laba jeer oo guji uu furi doono helitaanka waxyaabaha ku jira faylka.
Miyaad taqaan habab badan oo lagu gubo sawirka ISO illaa DVD ama warbaahinta kale?
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Guba ISO in DVD
Waxaan kuugu hambalyeynayaa maqaalka, waa qalab aad u wanaagsan oo lagu gubo ISO. ImgBurn waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican, shaki la'aan, in kasta oo ay leedahay dhowr beddelaad oo aan waxba ka hinaasin.
SanDisk iXpand Base, ka qaado iPhone-kaaga iyo kaydinta isla waqtigaas